Musharaxiinta Jubbaland oo qaadacay liiska Xildhibaanada cusub... | Universal Somali TV
Musharaxiinta Jubbaland oo qaadacay liiska Xildhibaanada cusub ee la soo bandhigay
Musharaxiinta mucaaradka ee Jubbaland ayaa waxay ka horyimaadeen Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Jubbaland, kuwaa oo ay sheegeen inay sharci-darro yihiin.
Guddiga Doorashada Jubbaland ayaa saacadihii ugu dambeeyay soo saaray liis ay ku qoran yihiin magacyada xubno ay sheegeen inay ka mid noqonayaan Baarlamaanka xigga ee Jubbaland.
Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka Jubbaland ayaa sheegay inay waxba kama jiraan yihiin Xildhibaanada cusub ee la soo bandhigay.
Musharaxa oo ku hadlayay afka musharaxiinta kale ayaa tilmaamay Guddiga Doorashada Jubbaland inay yihiin kuwo u janjeera haldhinac oo qura, isla-markaana aan kalsooni lagu qabi karin doorashada ay garwadeenka ka yihiin.
Guddiga Doorashada Jubbaland oo loo xagliyo dhinaca Madaxtooyada Jubbaland ayaa waxaa shaki badan laga muujinaya sida ay dhexdhexaad uga noqon karaan tartanka adag ee la fillaya in dhawaan uu ka qabsoomo Magaalada Kismaayo.
Iyadoo waxa ka socda Magaalada Kismaayo ay inta badan dadku saluugsan yihiin ayaa waxaa toddobaadkii hore go'aan adag ka qaadatay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliya, oo sheegtay inaanay aqoonsan doonin natiijada Doorashada Jubbaland.
Kan-xigaXildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland ...
Kan-horeGuddiga dib u heshiisiinta Galmudug o...
54,010,381 unique visits